Ogaden News Agency (ONA) – Filimkii -Oohinta Qarsoon2 (Silent Cry2)- oo meela kala duwan laga daawanayo
Filimkii -Oohinta Qarsoon2 (Silent Cry2)- oo meela kala duwan laga daawanayo
Posted by ONA Admin	/ February 27, 2012
Waxaa habeenkii Sabtida ahaa 2/25/12 lagu daadaway gobolka Minnesota qaybtii labaad ee filimkii la magac baxay Oohinta Qarsoon. Filimkan ayay si wada jir ah uu soo abaabuleen ururka dhalinyarada Ogadenya (OYSU) iyo jaaliyada Somalida Ogadenya ee gobolka Minnesota.
Filimka Oohinta Qarsoon oo in muda ahba la sugayay ayay dadwayne aad u farabadan ka soo qayb galeen ayadoo la soo buux dhaafiyay madashii filimlka lagu daawanayay. Kasoo qaybgalayaasha ayaa isugu jiray Jaaliyada Somalida Ogadenya, Walaalaha somaliyeed iyo siyasiyiin u dhashay wadanka Maraykanka.
Intii uunan bilaaban daawashada filimka ayaa waxaa madasha khudbado ka soo jeediyay masuuliyiin ka tirsan jaliyada Ogadenya. Waxaa kale oo ayaguna halkaas khudbado dhadheer ka soo jeediyay siyasiyiin ka tirsan baarlamanka wadankan maraykanaka iyo musharixiin u taagan dorashada Congress ka gobolkaMinnesota. Siyasiyiintan ayaa ayagu cadeeyay sida ay hiil ula garabtaaganyihiin shacabka dulman ee Ogadenya.
Waxaa xusid mudan gabdho aad u da’yar oo ku dhashay wadankan Maraykanka oo halkaasi ka soo jeediyay gabayo (Poem) luuqada English ka ku qornaa. Gabayada ay gabdhahani so jeediyeen ayaa runtii xanbaarsanaa fariimo iyo dhiilo ku saabsan dhibaatada ay gumaystada wayanuhu ku hayaan shacabka Ogadenya.
Intasi kadib waxaa bilowday dhawashii filimkii Ohinta Qarsoon oo ahaa runtii filim si wanaagsan loo soo diyaariyay. Filimka ayaa isagu gabi ahaanba ku saabsanaa tarikhda wadanka Ogadenya iyo dhibaato ay gumaysiga wayanuhu u gaysteen shacabka Ogadenya. Waxaa ka mid ahaa dad jidhdil loo gaystay oo nabaradii jidhkooda ka muuqdaan, dumar ay gumaysiga wayanuhu faraxumeeyeen iyo dad xadhig, jidhdil iyo kufsi intaba la isugu daray.
Fililkan oo runtii xanbarsanaa dhiilo aad u xanuun badan ayaa waax aad arkaysay mudadii uu socday inay dadkii daawanayan inbadan oo kamid ahi ay awoodi waayeen inay si toos ah u fiiriyaan filimka qaar badan oo kamid ahna ay oohin ku dhamaysteen.
Kadib markii uu filimkii dhamaaday ayay mar kale siyasiyiintii u dhashay wadanka maraykanka ee filimka dawanaysay ay ka hadleen saamaynta uu filimku ku yeshay waxayna wada qireen inuu filimku siwayn u taabtay dareenkoodu waxayna siyasiyiintani cadeeyeen inay u guntanayaan sidii ay dhibaatada Ogadenya u gaadhsiin lahaayeen dadka maraykanka ah iyo siyasiyiinta wadanka Maraykanka ah ee aan ka warhaynin xalada Ogadenya. Mid kamid ah siyasiyiinta ajanibta ahaa ee halkaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay inay nasiib daro tahay in qarniga 21 naad ay dhibaataani ka dhacyso Ogadenya, isla mar ahaantaana ay dhibatadan gaysanayan CiidamadaEthiopia.
Filimkan ayaa runtii ujeedadii laga lahaa laga gadhay, waxayna noo cadeeyeen masuuliyiintii ururka OYSU ee u howlanaa so bandhigida filimka oohinta qarsoon inay filimka gaadhsiinayaan gobolo badan oo ka tirsan wadanka Maraykanka isla mar ahaantaana waxaa filmkan lagu fidin doona dunida dacaladeeda.